Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/30 Martsa 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/30 Martsa 2013
iakaran' (nitranga in-1) : Iny faritra iny no nosafidian' ny mpiara-miombon'antoka noho izy iakaran'ny rano rehefa fahavaratra tahaka izao. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
sariitatra (nitranga in-1) : Mpanao sariitatra Cristian Hernández [es], nizara sary tamin'ireo mpanaraka azy ihany koa ary nilaza ny zavatra tsara vitan'ny ekipa:
Ramatoa Dominikana miboridana: “Nandresy izahay, naharesy an'i Etazonia isika. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Buenos (nitranga in-1) : Na ny Ligin'ny Baseball Dominikana aza namoaka izao tamin'ny kaonty Twitter-ny:
@LigaDomCom: Buenos días fanáticos. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
handball (nitranga in-1) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
hifamatotra (nitranga in-1) : lasa izay, ny enina amby enimpolo taona nitolomana
Fahatsiarovana sisa, ny ezaky ny fahafahana nijoroana Tamin'ny firaisankina, sy fifankatiavana maharitra No nifanatrehan'ny Gasy mahery fo, vonona hifamatotra Sivy amby roapolo marsa Marsa, daty manan-danja Tsy angano na sarimihetsika, hanarian-dia ny zaza Fa voasoratra hitoetra, ho lovan-janaka amam-para Ho tsarovana mandrakizay, satria fakan-tahaka tsara Dia ho dindona sisa ve, ny fiafaran'ny tantara. (Daty manan-danja)
fandraketana (nitranga in-1) : Na mavesa-danja toy inona aza izany zava-baovao izany, dia toa tongatonga ho azy, miaraka amin'ny isa noboriboriana, ny fandraketana ny tranga : 100, 100, 100, 200, 200, 200, 200…
Maridrefy Mundi http://www. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
tarehimarika (nitranga in-1) : Raha ny tarehimarika navoakan' ny sehatra mpanara-maso ny vary dia Ar 720 eo ny kilaon' ny akotry, Ar 1 270 ny vary gasy, Ar 1 370 ny makaolika, Ar 1 290 ny tsipala, Ar 1 270 ny vary “stock”. (Tapatapany)
tongatonga (nitranga in-1) : Na mavesa-danja toy inona aza izany zava-baovao izany, dia toa tongatonga ho azy, miaraka amin'ny isa noboriboriana, ny fandraketana ny tranga : 100, 100, 100, 200, 200, 200, 200…
nandraisan' (nitranga in-1) : ny 2 avrily 1969 no nandraisan'ny lietnà- kolonely Ratsimandrava Richard ny fibaikoana voalohany ny zandarimariam-pirenena malagasy. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
augustin (nitranga in-1) : augustin Baovola mitily ireo katitakely ho avin'ny baolina kitra malagasy teny Alarobia
Mitondra fanantenana. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
Poerto (nitranga in-2) : Tamin'ny Talata 19 Martsa 2013, nandrombaka ny fandresena farany tamin'ny Lalao Baseball Manerantany 2013 ny ekipa Dominikana, rehefa avy nandresy ny ekipa nasionaly Poerto Rikàna [es] tamin'ny isa 3-0. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Anjanahary (nitranga in-2) : B A
Voka-dalao AS Sopharmad Ambanidia (0) # FC X (3) FC 7M Betongolo (2) # Zay Mianakavy Fiteramana (3) FC Dragon Anjanahary (2) # FC Nishi (1) AJSA Antsahameva (0) # US Anami Nanisana (1) FC F Anjanahary (0) # 7 Familles Antsahameva (0). (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
Ekipan' (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
Ekipan'ny faritanin'i Fianarantsoa roa no tafita ho eo amin'ny dingan'ny manasa-dalana ho an'ny « Telma Challenge National U22 » eo amin'ny taranja basket ball, dia i Matsiatra ambony sy Amoron'i Mania. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
страны (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
Хлеборобы Туркменистана доставили на заготовительные пункты страны более миллиона тонн пшеницы. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Mafibe (nitranga in-2) : nisokatra omaly zoma teny amin'ny Kianjam-pasika, Fort Duchesne ny fifanintsanana amin'ny Tournoi Mafibe, ho an'ny sokajy senior, kitra lalaovin'olona fito, hiadiana ondry ao anatin'ny telo andro. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
nijoroana (nitranga in-1) : lasa izay, ny enina amby enimpolo taona nitolomana
Hanitry (nitranga in-2) : Hanitry Ny Aina. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
Rasoloarison (nitranga in-1) : Tsy hionona tamin'iny andiany voa- lohany iny ny sampana fa hanainga ireo mpitsabo isan-karazany indray afaka roa volana any ho any ka hifanome tanana ary hikarakara ireo marary tsy manana fahefa-mividy amin'ny fitsaboana sy ny fanafody
Monica Rasoloarison. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
hovitaina (nitranga in-1) : MIARA-TAPITRA > Raha ny nambaran'ny minisitra misahana ny Fampifandra- isana ireo andrim-panja-kana, Victor Manantsoa dia tokony hovitaina miaraka amin'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana ofisialy ny fampihavanam- pirenena izay tanterahan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy. (Sombiny)
более (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
karakarainy (nitranga in-1) : Azo jerena maimaim-poana, tsy andoavam-bola ireo lalao karakarainy, nomeny anarana hoe “Tournoi de l'espoir”, hatao etsy amin' ny kianjan'Alarobia ny 02 hatramin'ny 06 avrily ho avy izao. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
hifantenana (nitranga in-1) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
Tontosa tany Antsirabe omaly ny fampivondronana voalohany, ka niantsoana ireo mpilalao 18 hofantenana hiaro ny voninahitr'i Madagasikara amin'ny Masters, izay hatao any Frantsa amin'ity taona ity. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
hahita (nitranga in-1) : « Raha tiako hahita soritra sahady ny atao hoe fiainam-pianakaviana ireo zanako dia miaraka amin'ny fianakaviana ihany. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
namoaka (nitranga in-1) : Na ny Ligin'ny Baseball Dominikana aza namoaka izao tamin'ny kaonty Twitter-ny:
Index (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hitsirihana (nitranga in-1) : Mpilalao fito tamin'ireo 13 nanoina ny antson'ny federasiona no hiatrika ny fampivondronana faharoa, izay hotontosaina eto Antananarivo amin'ny alarobia ho avy izao ary hitsirihana ireo mpilalao efatra hiatrika ity fifaninanana goavana fanaontsika any Frantsa ity. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
Туркменистана (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
nihoarana (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Betongolo (nitranga in-1) : B A
nialàna (nitranga in-1) : Fotoana nialàna tamin'ny sosialy, toekarena ary politika marefo atrehin'ny firenena ankehitriny iny herinandro lasa iny. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
миллиона (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
Manerantany (nitranga in-2) : faly sy ravoravo ny fon'ireo Dominikana noho ny ezaka vitany tsy mampino nandritra ny fifaninanana Baseball Klasika Manerantany III. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
talen' (nitranga in-1) : “Hitohy amin'ny faritra maro izany ary hahazo ny anjarany avokoa ny fari-piadidiam-pampianarana rehetra”, araka ny nambaran'i Tsilanizara Maurille, talen'ny ofisy nasionaly momba ny fampianarana tsy miankina (Onep). (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Tiorkmenistana (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
потерь (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Fort (nitranga in-1) : nisokatra omaly zoma teny amin'ny Kianjam-pasika, Fort Duchesne ny fifanintsanana amin'ny Tournoi Mafibe, ho an'ny sokajy senior, kitra lalaovin'olona fito, hiadiana ondry ao anatin'ny telo andro. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
solontenan' (nitranga in-1) : Ny Iarivo FC, izay efa nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany, taorian'ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa no hifanandrina amin'ireto solontenan'i Madagasikara eo amin' ny fiadiana ny amboaran' ny Ranomasimbe Indianina any Kaomôro ireto. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
5000 (nitranga in-1) : Loka maherin'ny 5000 no hatolotra amin'ireo lalao ireo toy peluche, Tshirt, kojakoja ho an'ny fiarakodia, akoho…”, hoy ny mpikara- kara. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
lehibena (nitranga in-1) : « Mbola ho lava ny fety ka tsy maintsy hifandimby ireo mpamily hiasa », hoy kosa ny lehibena kaoperativa iray. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
hoentina (nitranga in-2) : Misy ihany koa ny tetibola Ar 726 tapitrisa, fantatra fa novinain'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena hoentina hampandeha ny fampianarana amin'ny ankapobeny. (Dingana voalohany)
Escalade (nitranga in-1) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Razafindravahy (nitranga in-1) : Iarahana mikarakara amin'ny PDS Razafindravahy Edgard sy ireo Boriborintany eto an- drenivohitra ity fifaninanana baolina kitra ho an'ireo taninketsakan'Iarivo ity, izay nanome azy ny kianjan'Alarobia hanaovana izany. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
nisian' (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory izay no nisian'ny loza mahatsiravina nahafatesana olona fito teo amin'ny tetezan'Ambohimandroso. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
Ekipa (nitranga in-1) : Ekipa avy amin'ny Cua maherin'ny 100, niampy ireo vehivavy amin'ny fikambanana “Vehivavy Miray Aina” tarihin-dRavololomanana Lalatiana, no nanatontosa izany fanadiovana izany. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
nanamarika (nitranga in-1) : Andro vitsy lasa izay no efa nisy tompon' andraikitra manamboninahitra jeneraly iray nanamarika fa « sarotra ny famahana ny olana ao Didy ». (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
alto (nitranga in-1) : Tao amin'ny Twitter, hoy ny tao amin'ny fiadidian'ny filoha:
@PresidenciaRD: ¡La bandera dominicana ondea por todo lo alto. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
fampivondronana (nitranga in-5) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
Ashgabat (nitranga in-1) : Fa mbola azo jerena ao amin'ny antontan'isa ofisialy ihany koa ny fampisehoan' i Ashgabat mibaribary ny fihetsika tsy voatandriny eo amin'ny zava-misy sy ny angon-tahiry momba ny isan'ny olona mitondra ny VIH eo amin'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
tompondakan' (nitranga in-3) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
Hialoha ny andro fahenina ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan' Analamanga, izay hifandonan'ny Iarivo Football club (IFC) sy ny Tana Formation FC, dia hihaona mialoha izy ireo, anio etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
asakasak' (nitranga in-1) : Mbola ala mangitsokitsoka anefa no hodiavina ka asakasak'izay hisioka sahady. (Dingana voalohany)
говорит (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Victor (nitranga in-1) : MIARA-TAPITRA > Raha ny nambaran'ny minisitra misahana ny Fampifandra- isana ireo andrim-panja-kana, Victor Manantsoa dia tokony hovitaina miaraka amin'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana ofisialy ny fampihavanam- pirenena izay tanterahan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy. (Sombiny)
Canal (nitranga in-1) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
nitrangana (nitranga in-1) : nitrangana loza mahatsiravina indray tany Ampitatafika, atsimon'Ambohiman-droso amin'ny lalam-pirenena fahafito, omaly. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
hihatery (nitranga in-2) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
hanatanterahana (nitranga in-1) : Eny amin'ny toby Fort-Duchesne no hanatanterahana an'ity fanamarihana ity ho an'ny eto an-drenivohitra, raha samy hanana ny azy kosa ny any amin' ny faritany. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
niantsoana (nitranga in-1) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
миллион (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
lefitry (nitranga in-1) : Tsy maintsy hanohy ny fidinana sy ny fanaraha-maso izahay anio (omaly) mba hitandroana ny filaminana”, araka ny nambaran'ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, tale lefitry ny kabinetra avy amin'ny Cua. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
hanainga (nitranga in-1) : Tsy hionona tamin'iny andiany voa- lohany iny ny sampana fa hanainga ireo mpitsabo isan-karazany indray afaka roa volana any ho any ka hifanome tanana ary hikarakara ireo marary tsy manana fahefa-mividy amin'ny fitsaboana sy ny fanafody
Tôta (nitranga in-1) : “Hiato herinandro kosa anefa ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny diviziona voalohany, hoentin'ireo ekipa miala sasatra kely amin'izao fetin'ny Paska izao”, hoy i Henintsoa Rakotoari-manana na i Tôta, filohan' ny ligin'Analamanga ho an'ny baolina kitra. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
mampisalasala (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia tena mbola misy ny tsy fitovi- an-kevitra amin'ireo samy mpikambana eo anivon'ity antoko naorin'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina ity, ka voalaza fa safidy eo amina olona roa no tena mampisalasala azy ireo. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
Star (nitranga in-1) : FIHENAM-BIDY
Manamafy ny toeran' ireo vokatra vokariny eny an-tsena ny orinasa Star amin'izao fetin'ny Paska izao. (Tapatapany)
hitandroana (nitranga in-1) : Tsy maintsy hanohy ny fidinana sy ny fanaraha-maso izahay anio (omaly) mba hitandroana ny filaminana”, araka ny nambaran'ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, tale lefitry ny kabinetra avy amin'ny Cua. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
Cadillac (nitranga in-2) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Gurbanguly (nitranga in-1) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
dominicana (nitranga in-1) : Tao amin'ny Twitter, hoy ny tao amin'ny fiadidian'ny filoha:
nahatonga (nitranga in-3) : Niala nipitika tany an-tanimbary ny kodiaran'ity fiara ka izay no nahatonga ny loza. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
Baseball (nitranga in-4) : faly sy ravoravo ny fon'ireo Dominikana noho ny ezaka vitany tsy mampino nandritra ny fifaninanana Baseball Klasika Manerantany III. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
pirenena (nitranga in-1) : MIARA-TAPITRA > Raha ny nambaran'ny minisitra misahana ny Fampifandra- isana ireo andrim-panja-kana, Victor Manantsoa dia tokony hovitaina miaraka amin'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana ofisialy ny fampihavanam- pirenena izay tanterahan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy. (Sombiny)
fanáticos (nitranga in-1) : Na ny Ligin'ny Baseball Dominikana aza namoaka izao tamin'ny kaonty Twitter-ny:
Sempotry (nitranga in-1) : rahetivololona sy Ralivao Sitraka Hanitrinialasamy milaza ny heviny amin'ny fanamarihana ny Paska
Sempotry ny fahasahiranana, hany ka tsy mahatokana vola firy hampifaliana ireo ankizy miala sasatra mandritra ny Paska ny isam-pianakaviana. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
mora (nitranga in-1) : Efa maro ireo tolotra mamaly ny filàn'ny tinady amin'ny resaka fripy fa mampiavaka ity hetsika iray ity ny fisian'ireo lohan'entana amin'ny vidiny mora. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
Lycée (nitranga in-1) : Tamin'ny alakamisy teo no nisantarana ny fizarana ny fanampiana tetsy amin'ny Lycée Rabearivelo Analakely. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Ambatolampy (nitranga in-2) : fiara iray marika »Mercedes Sprinter » nitondra olona avy any Ambatolampy hihazo an'Anjozorobe no tra-doza teo Andriampamaky, ny alarobia hariva teo tokony ho tamin'ny 4ora sy sasany. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
справиться (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
StumbleUpon (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [es] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
club (nitranga in-1) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
Hialoha ny andro fahenina ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan' Analamanga, izay hifandonan'ny Iarivo Football club (IFC) sy ny Tana Formation FC, dia hihaona mialoha izy ireo, anio etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
tampo (nitranga in-1) : Mbola izay fiaraha-misakafo izay ihany no hataonay mpiray tampo miaraka amin'ny ray aman-dreninay amin'io alatsinainin'ny Paska io. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
tanànan' (nitranga in-1) : “Tanjon'ny fididiana ny tanànan'Antananarivo ny hanampy ny fokontany tsirairay avy. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Berdymuhamedov (nitranga in-1) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
selección (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
hotontosaina (nitranga in-1) : Mpilalao fito tamin'ireo 13 nanoina ny antson'ny federasiona no hiatrika ny fampivondronana faharoa, izay hotontosaina eto Antananarivo amin'ny alarobia ho avy izao ary hitsirihana ireo mpilalao efatra hiatrika ity fifaninanana goavana fanaontsika any Frantsa ity. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
fotodrafitrasa (nitranga in-2) : FIARAHA-MIASA
Fanajariana ireo fotodrafitrasa, fiofanana araka asa sy fampianarana ambony, varotra sy fampiasam-bolan'ny tsy miankina, fambolena entina itadiavam-bola, fahasalamana, fampianarana,… Ireo no isan'ny ho atao laharam-pahamehana amin'ilay 550 tapitrisa dôlara hampilenda-lendain'ny Japoney an'i Afrika. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Amoron' (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
National (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
Faralala (nitranga in-3) : Faralala. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
kianjaben' (nitranga in-1) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
mibaribary (nitranga in-1) : Fa mbola azo jerena ao amin'ny antontan'isa ofisialy ihany koa ny fampisehoan' i Ashgabat mibaribary ny fihetsika tsy voatandriny eo amin'ny zava-misy sy ny angon-tahiry momba ny isan'ny olona mitondra ny VIH eo amin'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
богатый (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Dominicana (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
firaisankina (nitranga in-1) : lasa izay, ny enina amby enimpolo taona nitolomana
Dieta (nitranga in-1) : Tania Báez, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra nilaza tamin'ireo mpanaraka azy hoe:
@TaniaBaezHG: Cero Dieta. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
kanetibe (nitranga in-1) : “Henjankenjana ny masontsivana nifantenana ireo mpilalao ireo ary mbola hihatery izany amin'ny fampivondronana faharoa”, hoy i Beryl Razafindrainony, filohan'ny federasiona malagasin'ny tsipy kanetibe. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
Tania (nitranga in-1) : Tania Báez, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra nilaza tamin'ireo mpanaraka azy hoe:
Antsirabe (nitranga in-1) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
vokariny (nitranga in-1) : FIHENAM-BIDY
Dominikana (nitranga in-10) : faly sy ravoravo ny fon'ireo Dominikana noho ny ezaka vitany tsy mampino nandritra ny fifaninanana Baseball Klasika Manerantany III. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
zhhantar (nitranga in-1) : Mpanoratra Anna Fergana · Nandika zhhantar
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
llego (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
halalana (nitranga in-1) : « Hisy ny fampisehoana misokatra hampa- halalana kokoa ny mahakasika ny zandary sy ny fivoarany mandritra io hetsika io. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
Rakotoarivelo (nitranga in-1) : nANARARAOTRA > Omaly hariva no nidina an- dalambe nirohotra nana-titra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjan' Ambohijatovo ho fanamarihana ny andron'ny 29 marsa ireo mpikambana eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana izay notarihin'ny Filohan'ny kaongresin'ny tetezamita, Mamy Rakotoarivelo. (Sombiny)
Ralivao (nitranga in-2) : rahetivololona sy Ralivao Sitraka Hanitrinialasamy milaza ny heviny amin'ny fanamarihana ny Paska
Achecar (nitranga in-1) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [es] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
voatandriny (nitranga in-1) : Fa mbola azo jerena ao amin'ny antontan'isa ofisialy ihany koa ny fampisehoan' i Ashgabat mibaribary ny fihetsika tsy voatandriny eo amin'ny zava-misy sy ny angon-tahiry momba ny isan'ny olona mitondra ny VIH eo amin'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
naratra (nitranga in-4) : Olona enina no naratra tamin' ity lozam-pifamoivoizana ity. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
hifanandrina (nitranga in-2) : Ny Iarivo FC, izay efa nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany, taorian'ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa no hifanandrina amin'ireto solontenan'i Madagasikara eo amin' ny fiadiana ny amboaran' ny Ranomasimbe Indianina any Kaomôro ireto. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
Fernández (nitranga in-1) : #ManguPower
Filoha-lefitra Margarita Cedeño de Fernández nizara ny hafaliam-pony tao amin'ny kaonty Twitter-ny: @MargaritaCDF: Qué gran equipo. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Barphil (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
nasondrotry (nitranga in-2) : fampitam-baovao avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny seraseran'ny Zanda-rimariam-pirenena no nahalalana fa tsy manka- sitraka ilay didim-pitsa-rana nivoaka namotsorana ireo Srilankey vitsivitsy voarohirohy tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon'ny tany any Didy ireo vato nasondrotry ny tany avy any an-toerana. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
4ora (nitranga in-1) : fiara iray marika »Mercedes Sprinter » nitondra olona avy any Ambatolampy hihazo an'Anjozorobe no tra-doza teo Andriampamaky, ny alarobia hariva teo tokony ho tamin'ny 4ora sy sasany. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
Paska (nitranga in-12) : FIHENAM-BIDY
Manamafy ny toeran' ireo vokatra vokariny eny an-tsena ny orinasa Star amin'izao fetin'ny Paska izao. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
tale (nitranga in-1) : Tsy maintsy hanohy ny fidinana sy ny fanaraha-maso izahay anio (omaly) mba hitandroana ny filaminana”, araka ny nambaran'ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, tale lefitry ny kabinetra avy amin'ny Cua. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
mitsahatra (nitranga in-1) : Nandroso soso-kevitra [ru] ny olona iray fa na dia eo aza ny fijinjana ‘tsara' lazaina fa azo isan-taona, dia tsy mitsahatra ny miakatra ny vidin'ny mofo. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hifandonan' (nitranga in-1) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
basket (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
facebook (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
voaisako (nitranga in-1) : « Tsy voaisako intsony hoe impiry aho no nahita laharana efatra satria matetika mahita laharana efatra foana », hoy izy. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
tantànan' (nitranga in-2) : Taterin'[ru] ny tranonkala tantànan'ny fanjakàna, Turkmenistan. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Kaomôro (nitranga in-1) : Ny Iarivo FC, izay efa nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany, taorian'ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa no hifanandrina amin'ireto solontenan'i Madagasikara eo amin' ny fiadiana ny amboaran' ny Ranomasimbe Indianina any Kaomôro ireto. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
fampiantranoana (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
idiran' (nitranga in-1) : “Ny fampihavanam-pirenena tsy idiran'ny resaka politika no tena tiana navoitra nan- dritra io hetsika io, satria maro ireo ratsy manimba ny firenentsika, toy ny fisotroan-toaka, ny kolikoly, ny fitiavan-tena ary ny hafetsena”, hoy Raharison Tsilavo, filohan'ny sampana izay ivondronan'ny Laika ary miasa ivelan'ny fiangonana nikarakara ity fotoam-pivavahana ity. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
Nahena (nitranga in-1) : Nahena ho Ar 1 000 etsy ankilan'izay ny iray tavoahangy amin' ny labiera Thb 33 sl. (Tapatapany)
Full (nitranga in-1) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
Anatihazo (nitranga in-1) : Niroso tamin'ny fanadiovana ny tanàna izy ireo ny alakamisy teo tetsy amin'ny fokontany Andavamamba Anatihazo. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
hanamaivanana (nitranga in-1) : Entina hanampiana sy hanamaivanana ny vesatra zakain'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny ankizy no voalaza fa anton'izao fanampiana izao. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
ivoahan' (nitranga in-1) : Ny andro rahateo fety sady zoma, fotoana izay ivoahan'ny olona maro amin'ny hariva. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
fripy (nitranga in-1) : Efa maro ireo tolotra mamaly ny filàn'ny tinady amin'ny resaka fripy fa mampiavaka ity hetsika iray ity ny fisian'ireo lohan'entana amin'ny vidiny mora. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
kilaon' (nitranga in-1) : Raha ny tarehimarika navoakan' ny sehatra mpanara-maso ny vary dia Ar 720 eo ny kilaon' ny akotry, Ar 1 270 ny vary gasy, Ar 1 370 ny makaolika, Ar 1 290 ny tsipala, Ar 1 270 ny vary “stock”. (Tapatapany)
masontsivana (nitranga in-2) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
World (nitranga in-1) : 19 Martsa: Fandresena farany an'i Poerto Riko (3-0)
Nalaina tao amin'ny pejy Facebookn'ny World Baseball Classic ny sary. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
anatrehan' (nitranga in-1) : Elanelan'isa 10 (53 no ho 43) indray no nahatafavoaka ho mpandresy an'i Bongolava teo anatrehan'i Melaky teo amin'io ampahefa-dalana vehivavy io. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
2011 (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
vitan' (nitranga in-1) : Mpanao sariitatra Cristian Hernández [es], nizara sary tamin'ireo mpanaraka azy ihany koa ary nilaza ny zavatra tsara vitan'ny ekipa:
2013 (nitranga in-3) : ireo mpilalao efa nahazo tombontsoa goavana tamin' ny lalao Peo ny dimy
Laharana notsatotsatohana no nahazoan'i Daniel Fetraniaina, 21 taona, ny tontona Ar 10 tapitrisa, nandritra ny fisarihana tamin'ny lalao Peo ny dimy, ny zoma 22 marsa 2013. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
2012 (nitranga in-2) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hanombohan' (nitranga in-1) : Ny 18 avrily izao no hanombohan'io. (Dingana voalohany)
задачей (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Challenge (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
fiatrehana (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana navoakan'izy ireo ny alakamisy teo dia mbola tsy ampy ny fanomezam-baovao ireo olom-pirenena izay tokony efa hiomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana. (Sombiny)
урожай (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
vitany (nitranga in-2) : TSY AMPY > Nangataka ny Cenit mba hanao tatitra ireo asa vitany farafahakeliny isan-kerinandro ireo mpikambana eo ani-von'ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi). (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
fanatanjahatena (nitranga in-1) : Habaka misy ny pejin'ny fanatanjahatena En Pelota, sary nalefan'ireo mpankafy sasany tao amin'ny kianja, izay nahitana ny horakoram-pifaliana. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
hifanome (nitranga in-1) : Tsy hionona tamin'iny andiany voa- lohany iny ny sampana fa hanainga ireo mpitsabo isan-karazany indray afaka roa volana any ho any ka hifanome tanana ary hikarakara ireo marary tsy manana fahefa-mividy amin'ny fitsaboana sy ny fanafody
fididiana (nitranga in-1) : “Tanjon'ny fididiana ny tanànan'Antananarivo ny hanampy ny fokontany tsirairay avy. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
peluche (nitranga in-1) : Loka maherin'ny 5000 no hatolotra amin'ireo lalao ireo toy peluche, Tshirt, kojakoja ho an'ny fiarakodia, akoho…”, hoy ny mpikara- kara. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
Quisqueya (nitranga in-1) : 12 Martsa: Resy ny Quisqueya rehefa avy nandresy an'i Italia (5-4). (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
tsipala (nitranga in-1) : Raha ny tarehimarika navoakan' ny sehatra mpanara-maso ny vary dia Ar 720 eo ny kilaon' ny akotry, Ar 1 270 ny vary gasy, Ar 1 370 ny makaolika, Ar 1 290 ny tsipala, Ar 1 270 ny vary “stock”. (Tapatapany)
Abadan (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Rasoarimalala (nitranga in-1) : Any Anjozorobe izahay no saika handeha hanao fetin'ny Paska, saingy izao tra-doza izao », hoy Rasoarimalala Viviane, isan'ireo olona tao anatin'ilay fiara. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
Hanainga (nitranga in-1) : Hanainga amin'ny 4 avrily ho avy izao ny ekipam-pirenena malagasy, izay mbola tsy tena voafaritra ireo mpilalao handeha, hiatrika ny fifaninanana hanomboka amin'ny 6 avrily ho avy izao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
nahavita (nitranga in-1) : « Teo aloha no nahavita nivoaboaka. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
izy' (nitranga in-1) : Fa andeha hiverina amin'ny ‘tontolo tena izy,' tsy taitra firy amin'ny safidin'ny governemanta amin'ny vaovao ratsy na tsara ny Tiorkmena mponina amin'ny aterineto, eo amin'ny vavahadin'ny Chrono-tm. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hanampiana (nitranga in-1) : Entina hanampiana sy hanamaivanana ny vesatra zakain'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny ankizy no voalaza fa anton'izao fanampiana izao. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Joseph (nitranga in-1) : Nentina notsaboina avy hatrany tetsy amn'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria-navaloana avokoa ireo olona naratra. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
naory (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia tena mbola misy ny tsy fitovi- an-kevitra amin'ireo samy mpikambana eo anivon'ity antoko naorin'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina ity, ka voalaza fa safidy eo amina olona roa no tena mampisalasala azy ireo. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
nitondra (nitranga in-3) : fiara iray marika »Mercedes Sprinter » nitondra olona avy any Ambatolampy hihazo an'Anjozorobe no tra-doza teo Andriampamaky, ny alarobia hariva teo tokony ho tamin'ny 4ora sy sasany. (Sombiny)
Sainte (nitranga in-1) : Mikarakara ny andiany faharoan'ny “Tsenaben'ny friperie”, ireo fitafiana efa tontan'ny vahiny, ao amin'ny tokontanin'ny Institution Sainte Famille etsy Mahamasina ny orinasa Mad Univers. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
todo (nitranga in-1) : Tao amin'ny Twitter, hoy ny tao amin'ny fiadidian'ny filoha:
ligy (nitranga in-1) : “Hiato herinandro kosa anefa ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny diviziona voalohany, hoentin'ireo ekipa miala sasatra kely amin'izao fetin'ny Paska izao”, hoy i Henintsoa Rakotoari-manana na i Tôta, filohan' ny ligin'Analamanga ho an'ny baolina kitra. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
Alaotra (nitranga in-1) : Manao antso amin'ny Fitsarana izahay mba handinika lalina ny andraikitra raisina amin'ny toe-java-misy », hoy ilay fanambarana avy amin'ireo vato nasondrotry ny tany avy any Alaotra Mangoro. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
tokontany (nitranga in-1) : Mikarakara ny andiany faharoan'ny “Tsenaben'ny friperie”, ireo fitafiana efa tontan'ny vahiny, ao amin'ny tokontanin'ny Institution Sainte Famille etsy Mahamasina ny orinasa Mad Univers. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
zavabitan' (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
notsatotsatohana (nitranga in-1) : ireo mpilalao efa nahazo tombontsoa goavana tamin' ny lalao Peo ny dimy
Laharana notsatotsatohana no nahazoan'i Daniel Fetraniaina, 21 taona, ny tontona Ar 10 tapitrisa, nandritra ny fisarihana tamin'ny lalao Peo ny dimy, ny zoma 22 marsa 2013. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
Formation (nitranga in-1) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
Belarosia (nitranga in-1) : ru fa na i Alexander Lukashenko, Filohan'i Belarosia, aza dia nilaza fa nitsirirtra ny jinja vokatra Tiorkmena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
этого (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
nampalahelo (nitranga in-1) : Somary nampalahelo ny tsy fahafahan'ny Bori- borintany fahefatra handray anjara amin'ity fifaninanana ity, eny fa na dia maro aza ireo katitakely niandrandra ny hetsika tsy fahita firy tahaka izao. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
lamina (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
tenany (nitranga in-1) : Ny alarobia teo no naka ny lokany tetsy amin'ny toerana fanaovana ny fisarihana tetsy Ankorondrano ny tenany. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
dingan' (nitranga in-3) : Lalao tafiditra amin'ny dingan' ny ampahavalon-dalana ho an'ny fiadiana ny amboaran'Analamanga izy ity. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
nahita (nitranga in-2) : Tonga naka ny lokany ihany koa io alarobia io ireo nahita laharana efatra tamin'ny fisarihan'ny Peo ny dimy. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
tanàna (nitranga in-2) : Niroso tamin'ny fanadiovana ny tanàna izy ireo ny alakamisy teo tetsy amin'ny fokontany Andavamamba Anatihazo. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
nanatontosa (nitranga in-1) : Ekipa avy amin'ny Cua maherin'ny 100, niampy ireo vehivavy amin'ny fikambanana “Vehivavy Miray Aina” tarihin-dRavololomanana Lalatiana, no nanatontosa izany fanadiovana izany. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Cenit (nitranga in-1) : TSY AMPY > Nangataka ny Cenit mba hanao tatitra ireo asa vitany farafahakeliny isan-kerinandro ireo mpikambana eo ani-von'ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi). (Sombiny)
tsoahina (nitranga in-1) : Misy lesona tsoahinaNa misy na tsy misy ny vola, ho an-dRahetivololona Lalaina indray dia tsy maintsy misy lesona tsoahina amin'ny fialamboly atao rehefa fialan-tsasatra. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
закрома (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Razafimahefa (nitranga in-2) : Tsy maintsy hanohy ny fidinana sy ny fanaraha-maso izahay anio (omaly) mba hitandroana ny filaminana”, araka ny nambaran'ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, tale lefitry ny kabinetra avy amin'ny Cua. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
тонн (nitranga in-2) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
Tsilanizara (nitranga in-1) : “Hitohy amin'ny faritra maro izany ary hahazo ny anjarany avokoa ny fari-piadidiam-pampianarana rehetra”, araka ny nambaran'i Tsilanizara Maurille, talen'ny ofisy nasionaly momba ny fampianarana tsy miankina (Onep). (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
hatolotr' (nitranga in-1) : mbola ho adihevitra lalina eo amin'ireo samy mpikatroka politika eo anivon'ny antoko Tanora malaGasy Vonona ny fisafidianana ilay kandidà tokana hatolotr'izy ireo amin'ny fifidianana Filo- ham-pirenena. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
dakozia (nitranga in-1) : “Amidy ao ny akanjo, kiraro, poketra, atin'akanjo, fitaovan- dakozia mandeha amin'ny herinaratra. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
земледельцы (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
delicious (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
Nestor (nitranga in-1) : Isan'izy ireo Rafalimanana Nestor. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
результата (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Medina (nitranga in-1) : Na ny Filoha Danilo Medina aza mba nankafy ny zava-bitan'ny ekipa Dominikana. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
taty (nitranga in-1) : Fiaraha-misakafo no matetika atao taty aoriana. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
nanjavona (nitranga in-1) : comTrangan'ny VIH/SIDA any Turkmenistan
Ary raha nanjavona tao anatin'ny kisary ny olona mitondra ny otrik'aretina VIH, dia mitohy mitombo hatrany ihany kosa ny fijinjana ny varim-bazaha. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hihaona (nitranga in-1) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
zanany (nitranga in-1) : Amin'ity alatsinainin' ny Paska ity dia any amin'ny fianakaviany any Mantasoa no alefany ireo zanany mianadahy. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
Margarita (nitranga in-1) : #ManguPower
Trophy (nitranga in-1) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
Ambohimanambola (nitranga in-2) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
para (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Cero (nitranga in-1) : Tania Báez, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra nilaza tamin'ireo mpanaraka azy hoe:
dalambe (nitranga in-1) : nANARARAOTRA > Omaly hariva no nidina an- dalambe nirohotra nana-titra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjan' Ambohijatovo ho fanamarihana ny andron'ny 29 marsa ireo mpikambana eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana izay notarihin'ny Filohan'ny kaongresin'ny tetezamita, Mamy Rakotoarivelo. (Sombiny)
fifanintsanana (nitranga in-2) : nisokatra omaly zoma teny amin'ny Kianjam-pasika, Fort Duchesne ny fifanintsanana amin'ny Tournoi Mafibe, ho an'ny sokajy senior, kitra lalaovin'olona fito, hiadiana ondry ao anatin'ny telo andro. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
nitolomana (nitranga in-1) : lasa izay, ny enina amby enimpolo taona nitolomana
bandikely (nitranga in-1) : Malahelo ireo bandikely milalao eny an-tanimbary sy eny anelakelan-trano rehetra eny aho ka tapa-kevitra hikarakara io fihaonana ara-panatanjahantena. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
ananan' (nitranga in-1) : Azo heverina ho avoavo ihany ny teknika ananan'ireto mpilalao latsaky ny 20 taona mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ireto, araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra ara-teknika. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
hatolotry (nitranga in-1) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
ekipantsika (nitranga in-1) : #ManguPower
@LigaDomCom [es]: Miarahaba ireo mpankafy… Andron'ny fahamarinana androany ho an'ny ekipantsika Dominikana, andron'ny aina na ny fahafatesana androany ho an'i Holandy. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
taonina (nitranga in-2) : Nanolotra varim-bazaha iray tapitrisa taonina hoan'ny ivontoeran'ny famatsiana masomboly ny firenena ireo Tiorkmena mpamboly masomboly. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Cristian (nitranga in-1) : Mpanao sariitatra Cristian Hernández [es], nizara sary tamin'ireo mpanaraka azy ihany koa ary nilaza ny zavatra tsara vitan'ny ekipa:
Djibouty (nitranga in-2) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
ifotony (nitranga in-1) : Midina ifotony, mikaroka ny katitakely manan-talenta amin'ny baolina kitra Andriamiarinosy Augustin, ilay mpilalao iraisam-pirenena, reha- rehan'ny kitra malagasy fantatra amin'ny fiantsoana hoe Augustin Baovola. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
nitsirirtra (nitranga in-1) : ru fa na i Alexander Lukashenko, Filohan'i Belarosia, aza dia nilaza fa nitsirirtra ny jinja vokatra Tiorkmena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Andranobevava (nitranga in-2) : Manomboka amin'ny Ar 1 000 hatramin'ny Ar 3 000 kosa ny etsy Andranobevava, manampy ny vidim-pidirana Ar 200. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
hiomana (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana navoakan'izy ireo ny alakamisy teo dia mbola tsy ampy ny fanomezam-baovao ireo olom-pirenena izay tokony efa hiomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana. (Sombiny)
Analakely (nitranga in-1) : Tamin'ny alakamisy teo no nisantarana ny fizarana ny fanampiana tetsy amin'ny Lycée Rabearivelo Analakely. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Ankadikely (nitranga in-1) : Hialoha io lalao sangany io dia hifanehatra eo amin'io dingana ampahavalon-dalana io ny Cosfa sy ny Ravinala, izay ekipa avy any Ankadikely mifaninana eo amin'ny diviziona faharoa. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
nahazoan' (nitranga in-1) : ireo mpilalao efa nahazo tombontsoa goavana tamin' ny lalao Peo ny dimy
Richard (nitranga in-1) : ny 2 avrily 1969 no nandraisan'ny lietnà- kolonely Ratsimandrava Richard ny fibaikoana voalohany ny zandarimariam-pirenena malagasy. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
Beryl (nitranga in-1) : “Henjankenjana ny masontsivana nifantenana ireo mpilalao ireo ary mbola hihatery izany amin'ny fampivondronana faharoa”, hoy i Beryl Razafindrainony, filohan'ny federasiona malagasin'ny tsipy kanetibe. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
Independent (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
1969 (nitranga in-1) : ny 2 avrily 1969 no nandraisan'ny lietnà- kolonely Ratsimandrava Richard ny fibaikoana voalohany ny zandarimariam-pirenena malagasy. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
matiantoka (nitranga in-1) : Toe-javatra izay mampanahy ireo mpahay hary ihany satria vao mainka hidina ny vidim-bary ka hahatonga ireo tantsaha ho matiantoka rehefa tena ho ao anatin' ny fotoam-pijinjana isika. (Tapatapany)
Club (nitranga in-1) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
ezaky (nitranga in-1) : lasa izay, ny enina amby enimpolo taona nitolomana
Kiobà (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2009, niaina faharesena tsy nampoizina ny ekipa Dominikana tamin'ny nanintsanan'i Holandy azy tamin'ny fifaninanana, ary avy eo nifandrina tamin'i Kiobà indray. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
drenivohitra (nitranga in-1) : Iarahana mikarakara amin'ny PDS Razafindravahy Edgard sy ireo Boriborintany eto an- drenivohitra ity fifaninanana baolina kitra ho an'ireo taninketsakan'Iarivo ity, izay nanome azy ny kianjan'Alarobia hanaovana izany. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
isaky (nitranga in-1) : Samy hilalao inenina isaky ny ekipa, lalao telo no hataon'ny iray anio, lalao telo rahampitso. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
napetraka (nitranga in-3) : Nisy ny sakana napetraka tamin' ny lalana mankany saingy nisy namotika izany. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
fiarabe (nitranga in-1) : Tsy nitondra na inona na inona io fiarabe io ary tsy nisy antony hafa tokony ho nampitera-doza teo amin'ilay toerana afa-tsy ny fandehanana mafy ihany. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
notsaboina (nitranga in-1) : Nentina notsaboina avy hatrany tetsy amn'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria-navaloana avokoa ireo olona naratra. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
hovidiako (nitranga in-1) : Io solosaina io aloha no hovidiako », hoy izy. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
Mercedes (nitranga in-1) : « Avy any atsimo ilay kamiao marika Mercedes ary hiakatra ho any an-drenivohitra. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
hoenty (nitranga in-1) : “Hiato herinandro kosa anefa ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny diviziona voalohany, hoentin'ireo ekipa miala sasatra kely amin'izao fetin'ny Paska izao”, hoy i Henintsoa Rakotoari-manana na i Tôta, filohan' ny ligin'Analamanga ho an'ny baolina kitra. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
Sofia (nitranga in-1) : Tamin'ny isa 80 no ho 31 no nanamontsanan'ny ekipan'i Matsiatra ambony ny avy any Sofia, omaly. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
amn' (nitranga in-1) : Nentina notsaboina avy hatrany tetsy amn'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria-navaloana avokoa ireo olona naratra. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
naharesy (nitranga in-1) : Mpanao sariitatra Cristian Hernández [es], nizara sary tamin'ireo mpanaraka azy ihany koa ary nilaza ny zavatra tsara vitan'ny ekipa:
Tshirt (nitranga in-1) : Loka maherin'ny 5000 no hatolotra amin'ireo lalao ireo toy peluche, Tshirt, kojakoja ho an'ny fiarakodia, akoho…”, hoy ny mpikara- kara. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
пшеницы (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
senior (nitranga in-1) : nisokatra omaly zoma teny amin'ny Kianjam-pasika, Fort Duchesne ny fifanintsanana amin'ny Tournoi Mafibe, ho an'ny sokajy senior, kitra lalaovin'olona fito, hiadiana ondry ao anatin'ny telo andro. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
Famille (nitranga in-1) : Mikarakara ny andiany faharoan'ny “Tsenaben'ny friperie”, ireo fitafiana efa tontan'ny vahiny, ao amin'ny tokontanin'ny Institution Sainte Famille etsy Mahamasina ny orinasa Mad Univers. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
tanterahan' (nitranga in-1) : MIARA-TAPITRA > Raha ny nambaran'ny minisitra misahana ny Fampifandra- isana ireo andrim-panja-kana, Victor Manantsoa dia tokony hovitaina miaraka amin'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana ofisialy ny fampihavanam- pirenena izay tanterahan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy. (Sombiny)
borintany (nitranga in-1) : Somary nampalahelo ny tsy fahafahan'ny Bori- borintany fahefatra handray anjara amin'ity fifaninanana ity, eny fa na dia maro aza ireo katitakely niandrandra ny hetsika tsy fahita firy tahaka izao. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
Turkmenistan (nitranga in-3) : comTrangan'ny VIH/SIDA any Turkmenistan
atrehy (nitranga in-1) : Fotoana nialàna tamin'ny sosialy, toekarena ary politika marefo atrehin'ny firenena ankehitriny iny herinandro lasa iny. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
noboriboriana (nitranga in-1) : Na mavesa-danja toy inona aza izany zava-baovao izany, dia toa tongatonga ho azy, miaraka amin'ny isa noboriboriana, ny fandraketana ny tranga : 100, 100, 100, 200, 200, 200, 200…
hiasan' (nitranga in-1) : Hatreto kosa anefa tsy mbola voafaritra mazava ny ora farany hiasan'izy ireo saingy ny azo antoka fotsiny dia ahitana karazana mpiandry raharaha avokoa ny ankamaroan'ny zotra. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
hampiasàn' (nitranga in-1) : Maro ny olon-kafa no manontany hoe inona ary izao no hampiasàn'ireo mpamboly an'ity Cadillac avy amin'ny mpitarika Tiorkmena ity. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
zanako (nitranga in-1) : « Raha tiako hahita soritra sahady ny atao hoe fiainam-pianakaviana ireo zanako dia miaraka amin'ny fianakaviana ihany. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
comTrangan' (nitranga in-1) : comTrangan'ny VIH/SIDA any Turkmenistan
Anna (nitranga in-1) : Mpanoratra Anna Fergana · Nandika zhhantar
nakatona (nitranga in-1) : ny alakamisy nanom- boka tamin'ny 9 ora alina dia efa nakatona avokoa ireo trano fivarotana alikaola rehetra teto an-drenivohitra sy ny manodidina. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
hahabanga (nitranga in-1) : « Mba tsy hahabanga be loatra ny vola tokony hiditra dia nanapa-kevitra ny hiasa hatramin'ny alina izahay. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
Nangataka (nitranga in-1) : TSY AMPY > Nangataka ny Cenit mba hanao tatitra ireo asa vitany farafahakeliny isan-kerinandro ireo mpikambana eo ani-von'ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi). (Sombiny)
itondrana (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina
Ireo toerana azo ialana voly Maro ireo toerana azo itondrana ireo ankizy hiala voly eto an-drenivohitra amin'izao fotoam-pialan-tsasatry ny Paska izao. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
Grenadelle (nitranga in-1) : Eo ny fihenam-bidy fa misy ihany koa ny fampahafantarana ny vokatra vaovao toy ny Fanta Grenadelle 33 sl izay efa misy amin'ny tavoahangy ankehitriny. (Tapatapany)
Klasika (nitranga in-2) : faly sy ravoravo ny fon'ireo Dominikana noho ny ezaka vitany tsy mampino nandritra ny fifaninanana Baseball Klasika Manerantany III. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
hataon' (nitranga in-1) : Samy hilalao inenina isaky ny ekipa, lalao telo no hataon'ny iray anio, lalao telo rahampitso. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
Masters (nitranga in-1) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
Netherlands (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
hampandroso (nitranga in-1) : Tsy hijerena olona na antoko politika ny asa fa izay rehetra vonona hanome tanana entina hanatsarana sy hampandroso ny tanàna dia raisina avokoa”, hoy ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, avy amin'ny Cua izay nitarika ity hetsika ity. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Anjozorobe (nitranga in-1) : Any Anjozorobe izahay no saika handeha hanao fetin'ny Paska, saingy izao tra-doza izao », hoy Rasoarimalala Viviane, isan'ireo olona tao anatin'ilay fiara. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
Fergana (nitranga in-1) : Mpanoratra Anna Fergana · Nandika zhhantar
hosantarina (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'izany ny “Nerf playground” na karazan- dalao vaovao hosantarina voalohany eto Madagasikara. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
mpikatroka (nitranga in-1) : mbola ho adihevitra lalina eo amin'ireo samy mpikatroka politika eo anivon'ny antoko Tanora malaGasy Vonona ny fisafidianana ilay kandidà tokana hatolotr'izy ireo amin'ny fifidianana Filo- ham-pirenena. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
voarohirohy (nitranga in-1) : fampitam-baovao avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny seraseran'ny Zanda-rimariam-pirenena no nahalalana fa tsy manka- sitraka ilay didim-pitsa-rana nivoaka namotsorana ireo Srilankey vitsivitsy voarohirohy tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon'ny tany any Didy ireo vato nasondrotry ny tany avy any an-toerana. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
Ireto (nitranga in-2) : Ireto farany izay hanatanteraka ny kaongresy nasionaliny amin'ny faha-5 sy ny faha-6 n'ny volana avrily izao. (Sombiny)
fanjakàna (nitranga in-1) : Taterin'[ru] ny tranonkala tantànan'ny fanjakàna, Turkmenistan. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
gran (nitranga in-1) : #ManguPower
Mundy (nitranga in-2) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Pamela (nitranga in-1) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
Twitter (nitranga in-1) : Tao amin'ny Twitter, hoy ny tao amin'ny fiadidian'ny filoha:
ireto (nitranga in-4) : Ny Iarivo FC, izay efa nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany, taorian'ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa no hifanandrina amin'ireto solontenan'i Madagasikara eo amin' ny fiadiana ny amboaran' ny Ranomasimbe Indianina any Kaomôro ireto. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
Ankorondrano (nitranga in-1) : Ny alarobia teo no naka ny lokany tetsy amin'ny toerana fanaovana ny fisarihana tetsy Ankorondrano ny tenany. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
Farintany (nitranga in-1) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
niova (nitranga in-1) : vIDIM-BARY
Tsy dia niova loatra ny vidim-bary manoloana izao fidirana amin'ny fotoam-pijinjana izao. (Tapatapany)
nadika (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
ofisy (nitranga in-1) : “Hitohy amin'ny faritra maro izany ary hahazo ny anjarany avokoa ny fari-piadidiam-pampianarana rehetra”, araka ny nambaran'i Tsilanizara Maurille, talen'ny ofisy nasionaly momba ny fampianarana tsy miankina (Onep). (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
смогут (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Afrika (nitranga in-1) : FIARAHA-MIASA
Fanajariana ireo fotodrafitrasa, fiofanana araka asa sy fampianarana ambony, varotra sy fampiasam-bolan'ny tsy miankina, fambolena entina itadiavam-bola, fahasalamana, fampianarana,… Ireo no isan'ny ho atao laharam-pahamehana amin'ilay 550 tapitrisa dôlara hampilenda-lendain'ny Japoney an'i Afrika. (Tapatapany)
mampanahy (nitranga in-1) : Toe-javatra izay mampanahy ireo mpahay hary ihany satria vao mainka hidina ny vidim-bary ka hahatonga ireo tantsaha ho matiantoka rehefa tena ho ao anatin' ny fotoam-pijinjana isika. (Tapatapany)
Razafindrainony (nitranga in-1) : “Henjankenjana ny masontsivana nifantenana ireo mpilalao ireo ary mbola hihatery izany amin'ny fampivondronana faharoa”, hoy i Beryl Razafindrainony, filohan'ny federasiona malagasin'ny tsipy kanetibe. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
John (nitranga in-1) : Amin'ny alahady kosa ny hanaovana ny lalao famaranana rehetra », hoy Randrianindrina John, mpandrindra ity Tournoi Mafibe ity. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
Hernández (nitranga in-1) : Mpanao sariitatra Cristian Hernández [es], nizara sary tamin'ireo mpanaraka azy ihany koa ary nilaza ny zavatra tsara vitan'ny ekipa:
Facebookn' (nitranga in-1) : 19 Martsa: Fandresena farany an'i Poerto Riko (3-0)
Rakotomavo (nitranga in-1) : Tsy mbola afaka maminany mialoha izay fanapahan-kevitra hivoaka aorian'io fiha- onana io izahay»,araka ny fanazavan'ny sekretera nasi-onalin'ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, omaly. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
Bongolava (nitranga in-2) : Analamanga sy Bongolava kosa no hifanandrina amin' izy ireo anio eny amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
Viviane (nitranga in-1) : Any Anjozorobe izahay no saika handeha hanao fetin'ny Paska, saingy izao tra-doza izao », hoy Rasoarimalala Viviane, isan'ireo olona tao anatin'ilay fiara. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
reddit (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
alefany (nitranga in-1) : Amin'ity alatsinainin' ny Paska ity dia any amin'ny fianakaviany any Mantasoa no alefany ireo zanany mianadahy. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
mampino (nitranga in-1) : faly sy ravoravo ny fon'ireo Dominikana noho ny ezaka vitany tsy mampino nandritra ny fifaninanana Baseball Klasika Manerantany III. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Anosizato (nitranga in-1) : Toy ny etsy Andranobevava ihany ny ao Anosizato, saingy afaka milalao “gonflables” sy “trampolines” mandritra ny tontolo andro ireo ankizy raha mandoa Ar 5 000 avy hatrany. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
nahatafavoaka (nitranga in-1) : Elanelan'isa 10 (53 no ho 43) indray no nahatafavoaka ho mpandresy an'i Bongolava teo anatrehan'i Melaky teo amin'io ampahefa-dalana vehivavy io. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
главной (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
notolorana (nitranga in-1) : Mahatratra eo amin'ny 5 386 ireo sekoly tsy miankina hahazo ireo fanampiana ireo manerana ny Nosy, ka fari-piadidiam-pampianarana miisa valo eto amin'ny faritra Analamanga no efa notolorana ny anjarany tamin'ny alakamisy teo. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
karakaraiko (nitranga in-1) : “Kitra lalaovin'olona 11 amin'ny sokajy U13 no karakaraiko. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
kandidà (nitranga in-2) : mbola ho adihevitra lalina eo amin'ireo samy mpikatroka politika eo anivon'ny antoko Tanora malaGasy Vonona ny fisafidianana ilay kandidà tokana hatolotr'izy ireo amin'ny fifidianana Filo- ham-pirenena. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
Ravoahangy (nitranga in-1) : Nentina notsaboina avy hatrany tetsy amn'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria-navaloana avokoa ireo olona naratra. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
Tiorkena (nitranga in-1) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Ligy (nitranga in-1) : Na ny Ligin'ny Baseball Dominikana aza namoaka izao tamin'ny kaonty Twitter-ny:
hiasa (nitranga in-2) : « Mba tsy hahabanga be loatra ny vola tokony hiditra dia nanapa-kevitra ny hiasa hatramin'ny alina izahay. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
hanonitra (nitranga in-1) : Manoloana izany fahabangana teo amin'ny asan'ny mpitatitra izay dia maro tamin'izy ireo no nilaza fa hanonitra ny ora fiasana ka hiantoka ny fitaterana hatramin' ny alina aza, amin'ity faran' ny herinandron'ny Paska ity. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
makaolika (nitranga in-1) : Raha ny tarehimarika navoakan' ny sehatra mpanara-maso ny vary dia Ar 720 eo ny kilaon' ny akotry, Ar 1 270 ny vary gasy, Ar 1 370 ny makaolika, Ar 1 290 ny tsipala, Ar 1 270 ny vary “stock”. (Tapatapany)
Randrianindrina (nitranga in-1) : Amin'ny alahady kosa ny hanaovana ny lalao famaranana rehetra », hoy Randrianindrina John, mpandrindra ity Tournoi Mafibe ity. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
solontenantsika (nitranga in-1) : Tamin'ny taon-dasa dia niatrika ny lalao famaranana ireo solontenantsika tamin'io fifaninanana iraisam-pirenena io. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
hanatsarana (nitranga in-1) : Tsy hijerena olona na antoko politika ny asa fa izay rehetra vonona hanome tanana entina hanatsarana sy hampandroso ny tanàna dia raisina avokoa”, hoy ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, avy amin'ny Cua izay nitarika ity hetsika ity. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Mpilalao (nitranga in-1) : Mpilalao fito tamin'ireo 13 nanoina ny antson'ny federasiona no hiatrika ny fampivondronana faharoa, izay hotontosaina eto Antananarivo amin'ny alarobia ho avy izao ary hitsirihana ireo mpilalao efatra hiatrika ity fifaninanana goavana fanaontsika any Frantsa ity. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
AJSA (nitranga in-1) : B A
Rikàna (nitranga in-1) : Tamin'ny Talata 19 Martsa 2013, nandrombaka ny fandresena farany tamin'ny Lalao Baseball Manerantany 2013 ny ekipa Dominikana, rehefa avy nandresy ny ekipa nasionaly Poerto Rikàna [es] tamin'ny isa 3-0. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
filàn' (nitranga in-1) : Efa maro ireo tolotra mamaly ny filàn'ny tinady amin'ny resaka fripy fa mampiavaka ity hetsika iray ity ny fisian'ireo lohan'entana amin'ny vidiny mora. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
anton' (nitranga in-2) : Entina hanampiana sy hanamaivanana ny vesatra zakain'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny ankizy no voalaza fa anton'izao fanampiana izao. (Sombiny)
fihetsiky (nitranga in-1) : Ireto farany izay nitondra sora-baventy fanoherana ny fihetsiky ny Frantsay manoloana ny famahana ny krizy politika eto Madagasikara. (Sombiny)
хлеба (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
katitakely (nitranga in-3) : augustin Baovola mitily ireo katitakely ho avin'ny baolina kitra malagasy teny Alarobia
hanamarihana (nitranga in-1) : « Zandarimaria manakaiky kokoa ny vahoaka », no lohahevitra hanamarihana ny andron'ny zandary amin'ity taona ity. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
namotsorana (nitranga in-1) : fampitam-baovao avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny seraseran'ny Zanda-rimariam-pirenena no nahalalana fa tsy manka- sitraka ilay didim-pitsa-rana nivoaka namotsorana ireo Srilankey vitsivitsy voarohirohy tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon'ny tany any Didy ireo vato nasondrotry ny tany avy any an-toerana. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
equipo (nitranga in-1) : #ManguPower
Srilankey (nitranga in-1) : fampitam-baovao avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny seraseran'ny Zanda-rimariam-pirenena no nahalalana fa tsy manka- sitraka ilay didim-pitsa-rana nivoaka namotsorana ireo Srilankey vitsivitsy voarohirohy tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon'ny tany any Didy ireo vato nasondrotry ny tany avy any an-toerana. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
Commonwealth (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
fiara (nitranga in-9) : fiara iray marika »Mercedes Sprinter » nitondra olona avy any Ambatolampy hihazo an'Anjozorobe no tra-doza teo Andriampamaky, ny alarobia hariva teo tokony ho tamin'ny 4ora sy sasany. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
faharoan' (nitranga in-1) : Mikarakara ny andiany faharoan'ny “Tsenaben'ny friperie”, ireo fitafiana efa tontan'ny vahiny, ao amin'ny tokontanin'ny Institution Sainte Famille etsy Mahamasina ny orinasa Mad Univers. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
Dragon (nitranga in-1) : B A
hoankalazaina (nitranga in-1) : Noho ireo antony ireo dia hoankalazaina manokana ny andron'ny 2 avrily manomboka izao ho andron'ny zandarimariam-pirenena. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
novinay (nitranga in-1) : Misy ihany koa ny tetibola Ar 726 tapitrisa, fantatra fa novinain'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena hoentina hampandeha ny fampianarana amin'ny ankapobeny. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Classic (nitranga in-1) : 19 Martsa: Fandresena farany an'i Poerto Riko (3-0)
ekipan' (nitranga in-7) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
Ekipan'ny faritanin'i Fianarantsoa roa no tafita ho eo amin'ny dingan'ny manasa-dalana ho an'ny « Telma Challenge National U22 » eo amin'ny taranja basket ball, dia i Matsiatra ambony sy Amoron'i Mania. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
indexmundy (nitranga in-1) : indexmundi. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
nahafatesana (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory izay no nisian'ny loza mahatsiravina nahafatesana olona fito teo amin'ny tetezan'Ambohimandroso. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
nahitana (nitranga in-2) : Nisy famatsiana fitaovana entiny manatsara ny fotodrafitrasa ao an-toerana, nahitana simenitra sy vatokely ary fasika. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
hampandeha (nitranga in-1) : Misy ihany koa ny tetibola Ar 726 tapitrisa, fantatra fa novinain'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena hoentina hampandeha ny fampianarana amin'ny ankapobeny. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
fitsatotsatohana (nitranga in-1) : Tsy misy kajikajy fa dia fitsatotsatohana laharana ihany koa no nahazoany io loka io. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
hisian' (nitranga in-1) : Mba hisian'ny fitoniana tanteraka mialoha ny fifidianana no anton' izay raha ny heviny. (Sombiny)
Alexander (nitranga in-1) : ru fa na i Alexander Lukashenko, Filohan'i Belarosia, aza dia nilaza fa nitsirirtra ny jinja vokatra Tiorkmena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Raharison (nitranga in-1) : “Ny fampihavanam-pirenena tsy idiran'ny resaka politika no tena tiana navoitra nan- dritra io hetsika io, satria maro ireo ratsy manimba ny firenentsika, toy ny fisotroan-toaka, ny kolikoly, ny fitiavan-tena ary ny hafetsena”, hoy Raharison Tsilavo, filohan'ny sampana izay ivondronan'ny Laika ary miasa ivelan'ny fiangonana nikarakara ity fotoam-pivavahana ity. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
lamba (nitranga in-1) : Toy ny mahazatra ihany koa, ny andron'ny 29 marsa, dia takonana lamba ireo zava-pisotro rehetra misy alikaola eny anivon'ny tsena. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
Родины (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
aminà (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
ivontoeran' (nitranga in-1) : Nanolotra varim-bazaha iray tapitrisa taonina hoan'ny ivontoeran'ny famatsiana masomboly ny firenena ireo Tiorkmena mpamboly masomboly. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Beach (nitranga in-2) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
nihodinkodinan' (nitranga in-1) : Efa am-bolana maro ihany mantsy no nihodinkodinan'ireo Filoham-piangonana tamin'ity fanelanelanana ity. (Dingana voalohany)
Antsahameva (nitranga in-2) : B A
minia (nitranga in-1) : “Efa manomboka manara-dalàna ireo mpivarotra, nefa na izany aza misy ihany ireo mbola minia mivarotra an-tsokosoko, indrindra ireo mpivarotra tsy ara-dalàna. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
Randrianazary (nitranga in-1) : Isan' ireo ao anatin'izany ny jeneraly Randrianazary, sekreteram-panjakana miadidy ny Zandari-amariam-pirenena. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
lava (nitranga in-1) : « Mbola ho lava ny fety ka tsy maintsy hifandimby ireo mpamily hiasa », hoy kosa ny lehibena kaoperativa iray. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
nisantarana (nitranga in-1) : Tamin'ny alakamisy teo no nisantarana ny fizarana ny fanampiana tetsy amin'ny Lycée Rabearivelo Analakely. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Tournoy (nitranga in-2) : nisokatra omaly zoma teny amin'ny Kianjam-pasika, Fort Duchesne ny fifanintsanana amin'ny Tournoi Mafibe, ho an'ny sokajy senior, kitra lalaovin'olona fito, hiadiana ondry ao anatin'ny telo andro. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
drina (nitranga in-1) : “Karazana bandy sy rôla io fa ny bala dia miraikitra amin' ny akanjon'ny mpifanan- drina. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
nasandratry (nitranga in-1) : Vavaka lehibe ho an'ny tanindrazana no nasandratry ny antoko mpihira maro sy ireo mpitarika ao amin'ny Sampana Samaritana Tsara Fanahy, omaly, teny amin' ny fokontany Ambohipo. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
ball (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
Jocelyn (nitranga in-2) : Tsy maintsy hanohy ny fidinana sy ny fanaraha-maso izahay anio (omaly) mba hitandroana ny filaminana”, araka ny nambaran'ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, tale lefitry ny kabinetra avy amin'ny Cua. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Rasoloharison (nitranga in-1) : Monica Rasoloharison. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
bala (nitranga in-1) : “Karazana bandy sy rôla io fa ny bala dia miraikitra amin' ny akanjon'ny mpifanan- drina. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
nanintsanan' (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2009, niaina faharesena tsy nampoizina ny ekipa Dominikana tamin'ny nanintsanan'i Holandy azy tamin'ny fifaninanana, ary avy eo nifandrina tamin'i Kiobà indray. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
rahetivololona (nitranga in-1) : rahetivololona sy Ralivao Sitraka Hanitrinialasamy milaza ny heviny amin'ny fanamarihana ny Paska
nanjary (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
dôlara (nitranga in-1) : FIARAHA-MIASA
Mantasoa (nitranga in-1) : Amin'ity alatsinainin' ny Paska ity dia any amin'ny fianakaviany any Mantasoa no alefany ireo zanany mianadahy. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
hôpitaly (nitranga in-1) : Nentina notsaboina avy hatrany tetsy amn'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria-navaloana avokoa ireo olona naratra. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
dritra (nitranga in-1) : “Ny fampihavanam-pirenena tsy idiran'ny resaka politika no tena tiana navoitra nan- dritra io hetsika io, satria maro ireo ratsy manimba ny firenentsika, toy ny fisotroan-toaka, ny kolikoly, ny fitiavan-tena ary ny hafetsena”, hoy Raharison Tsilavo, filohan'ny sampana izay ivondronan'ny Laika ary miasa ivelan'ny fiangonana nikarakara ity fotoam-pivavahana ity. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
fanalàna (nitranga in-1) : rehefa antontan'isa no resaka, dia mijanona manaraka am-bokony fotsiny ny foto-kevitra fony faha-Sovietika ny governemanta Tiorkmena, toy ny amin'ny boky fandrahoan-tsakafo, fanodinkodinana angon-tahiry sy fanalàna an'izay marina rehetra mety manelingelina. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
nolazaina (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Univers (nitranga in-1) : Mikarakara ny andiany faharoan'ny “Tsenaben'ny friperie”, ireo fitafiana efa tontan'ny vahiny, ao amin'ny tokontanin'ny Institution Sainte Famille etsy Mahamasina ny orinasa Mad Univers. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
nuestra (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
nihaonan' (nitranga in-1) : Tsy dia ampy fanazaran-tena anefa ireto ekipan'ny kaominina Antananarivo Renivohitra ireto teo alohan'ny lalao tsapa nihaonan'izy ireo teny amin'ny kianja ivelan'
i Mahamasina, ny alakamisy lasa teo. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
Daniel (nitranga in-1) : ireo mpilalao efa nahazo tombontsoa goavana tamin' ny lalao Peo ny dimy
verdad (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Familles (nitranga in-1) : B A
Filankevitry (nitranga in-1) : MIARA-TAPITRA > Raha ny nambaran'ny minisitra misahana ny Fampifandra- isana ireo andrim-panja-kana, Victor Manantsoa dia tokony hovitaina miaraka amin'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana ofisialy ny fampihavanam- pirenena izay tanterahan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy. (Sombiny)
Instapaper (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
Danilo (nitranga in-1) : Na ny Filoha Danilo Medina aza mba nankafy ny zava-bitan'ny ekipa Dominikana. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
vida (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Football (nitranga in-1) : nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany ny IFC taorian' ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa
avrily (nitranga in-7) : ny 2 avrily 1969 no nandraisan'ny lietnà- kolonely Ratsimandrava Richard ny fibaikoana voalohany ny zandarimariam-pirenena malagasy. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
ivondronan' (nitranga in-1) : “Ny fampihavanam-pirenena tsy idiran'ny resaka politika no tena tiana navoitra nan- dritra io hetsika io, satria maro ireo ratsy manimba ny firenentsika, toy ny fisotroan-toaka, ny kolikoly, ny fitiavan-tena ary ny hafetsena”, hoy Raharison Tsilavo, filohan'ny sampana izay ivondronan'ny Laika ary miasa ivelan'ny fiangonana nikarakara ity fotoam-pivavahana ity. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
2009 (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2009, niaina faharesena tsy nampoizina ny ekipa Dominikana tamin'ny nanintsanan'i Holandy azy tamin'ny fifaninanana, ary avy eo nifandrina tamin'i Kiobà indray. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
masimbe (nitranga in-1) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
Analamanga (nitranga in-3) : Mahatratra eo amin'ny 5 386 ireo sekoly tsy miankina hahazo ireo fanampiana ireo manerana ny Nosy, ka fari-piadidiam-pampianarana miisa valo eto amin'ny faritra Analamanga no efa notolorana ny anjarany tamin'ny alakamisy teo. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
vakiana (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Institution (nitranga in-1) : Mikarakara ny andiany faharoan'ny “Tsenaben'ny friperie”, ireo fitafiana efa tontan'ny vahiny, ao amin'ny tokontanin'ny Institution Sainte Famille etsy Mahamasina ny orinasa Mad Univers. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
nifantenana (nitranga in-1) : “Henjankenjana ny masontsivana nifantenana ireo mpilalao ireo ary mbola hihatery izany amin'ny fampivondronana faharoa”, hoy i Beryl Razafindrainony, filohan'ny federasiona malagasin'ny tsipy kanetibe. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
Andavamamba (nitranga in-1) : Niroso tamin'ny fanadiovana ny tanàna izy ireo ny alakamisy teo tetsy amin'ny fokontany Andavamamba Anatihazo. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
hiantoka (nitranga in-1) : Manoloana izany fahabangana teo amin'ny asan'ny mpitatitra izay dia maro tamin'izy ireo no nilaza fa hanonitra ny ora fiasana ka hiantoka ny fitaterana hatramin' ny alina aza, amin'ity faran' ny herinandron'ny Paska ity. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
hanatanteraka (nitranga in-1) : Ireto farany izay hanatanteraka ny kaongresy nasionaliny amin'ny faha-5 sy ny faha-6 n'ny volana avrily izao. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
Lukashenko (nitranga in-1) : ru fa na i Alexander Lukashenko, Filohan'i Belarosia, aza dia nilaza fa nitsirirtra ny jinja vokatra Tiorkmena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
natao (nitranga in-1) : Nandray anjara tamin'ilay fiaraha-midinika natao teo anivon'ny foiben'ny Vondrona afrikanina tao Etiopia ny 16 sy 17 marsa, mahakasika io fiaraha-miasa Japana-Afrika io i Madagasikara. (Tapatapany)
Хлеборобы (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
Martínez (nitranga in-1) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
пункты (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
зерна (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Rabearivelo (nitranga in-1) : Tamin'ny alakamisy teo no nisantarana ny fizarana ny fanampiana tetsy amin'ny Lycée Rabearivelo Analakely. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
Nandroso (nitranga in-1) : Nandroso soso-kevitra [ru] ny olona iray fa na dia eo aza ny fijinjana ‘tsara' lazaina fa azo isan-taona, dia tsy mitsahatra ny miakatra ny vidin'ny mofo. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
nivoaboaka (nitranga in-1) : « Teo aloha no nahavita nivoaboaka. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
rôla (nitranga in-1) : “Karazana bandy sy rôla io fa ny bala dia miraikitra amin' ny akanjon'ny mpifanan- drina. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
mirefy (nitranga in-2) : niavaka ny nanamarihan'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) sy ny mpiara-miombon'antoka aminy ny fanomanana ny fetin' ny Paska, tamina lalan-kely mirefy 70 metatra sy lakandrano mirefy 200 metatra. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
nisolo (nitranga in-1) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
fahabangana (nitranga in-1) : Manoloana izany fahabangana teo amin'ny asan'ny mpitatitra izay dia maro tamin'izy ireo no nilaza fa hanonitra ny ora fiasana ka hiantoka ny fitaterana hatramin' ny alina aza, amin'ity faran' ny herinandron'ny Paska ity. (Faran’ny herinandron’ny fety – Nanome toky hiasa hatramin’ ny alina ireo mpitatitra)
twitter (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
Cosfa (nitranga in-1) : Hialoha io lalao sangany io dia hifanehatra eo amin'io dingana ampahavalon-dalana io ny Cosfa sy ny Ravinala, izay ekipa avy any Ankadikely mifaninana eo amin'ny diviziona faharoa. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
Ampitatafika (nitranga in-1) : nitrangana loza mahatsiravina indray tany Ampitatafika, atsimon'Ambohiman-droso amin'ny lalam-pirenena fahafito, omaly. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
Italia (nitranga in-1) : 12 Martsa: Resy ny Quisqueya rehefa avy nandresy an'i Italia (5-4). (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Melaky (nitranga in-1) : Elanelan'isa 10 (53 no ho 43) indray no nahatafavoaka ho mpandresy an'i Bongolava teo anatrehan'i Melaky teo amin'io ampahefa-dalana vehivavy io. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
ankilan' (nitranga in-1) : Nahena ho Ar 1 000 etsy ankilan'izay ny iray tavoahangy amin' ny labiera Thb 33 sl. (Tapatapany)
Augustin (nitranga in-3) : Midina ifotony, mikaroka ny katitakely manan-talenta amin'ny baolina kitra Andriamiarinosy Augustin, ilay mpilalao iraisam-pirenena, reha- rehan'ny kitra malagasy fantatra amin'ny fiantsoana hoe Augustin Baovola. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
Telma (nitranga in-1) : isan'ny tafita amin'ny manasa-dalana ny ekipan' i Matsiatra ambony (manga)
Ranomasimbe (nitranga in-1) : Ny Iarivo FC, izay efa nanavao tanteraka ny fitantanana ara-teknikany, taorian'ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny taon-dasa no hifanandrina amin'ireto solontenan'i Madagasikara eo amin' ny fiadiana ny amboaran' ny Ranomasimbe Indianina any Kaomôro ireto. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
Nishy (nitranga in-1) : B A
Events (nitranga in-1) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Hetsika « D full party » – Karazan-dalao 30 no hatolotra ho an’ny mpanotrona)
boka (nitranga in-1) : ny alakamisy nanom- boka tamin'ny 9 ora alina dia efa nakatona avokoa ireo trano fivarotana alikaola rehetra teto an-drenivohitra sy ny manodidina. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
hanaovana (nitranga in-3) : Eny amin'ny Batou Beach Ambohimanambola no hanaovana ny fampivondronana faharoa, izay haharitra telo andro, araka ny nambaran'io filohan' ny federasiona io hatrany. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
mpilalao (nitranga in-8) : ireo mpilalao efa nahazo tombontsoa goavana tamin' ny lalao Peo ny dimy
Laharana notsatotsatohana no nahazoan'i Daniel Fetraniaina, 21 taona, ny tontona Ar 10 tapitrisa, nandritra ny fisarihana tamin'ny lalao Peo ny dimy, ny zoma 22 marsa 2013. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
minisiteran' (nitranga in-2) : niroso tamin'ny fanampiana ireo sekoly tsy miankina ny avy amin'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
доставили (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
Pelota (nitranga in-1) : Habaka misy ny pejin'ny fanatanjahatena En Pelota, sary nalefan'ireo mpankafy sasany tao amin'ny kianja, izay nahitana ny horakoram-pifaliana. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
nasionaliny (nitranga in-1) : Ireto farany izay hanatanteraka ny kaongresy nasionaliny amin'ny faha-5 sy ny faha-6 n'ny volana avrily izao. (Fifidianana filoha – Mbola sahirana mitady ny kandidany ny Tgv)
Hanitrinialasamy (nitranga in-1) : rahetivololona sy Ralivao Sitraka Hanitrinialasamy milaza ny heviny amin'ny fanamarihana ny Paska
manerantany (nitranga in-1) : Tao anatin'ny Lalao Klasika, sambany nandrombaka ny fifaninanana manerantany ilay ekipa tsy mety resy. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
hahatonga (nitranga in-1) : Toe-javatra izay mampanahy ireo mpahay hary ihany satria vao mainka hidina ny vidim-bary ka hahatonga ireo tantsaha ho matiantoka rehefa tena ho ao anatin' ny fotoam-pijinjana isika. (Tapatapany)
tiako (nitranga in-2) : « Raha tiako hahita soritra sahady ny atao hoe fiainam-pianakaviana ireo zanako dia miaraka amin'ny fianakaviana ihany. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
Fiteramana (nitranga in-1) : B A
boninahitra (nitranga in-1) : Izy ihany koa no manam- boninahitra malagasy voalohany nandray izany fibaikoana izany. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
Ambohimahasoa (nitranga in-1) : Taona faharoa amin'ny fianarana ny teny sinoa ao Ambohimahasoa izy. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
nifandrina (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2009, niaina faharesena tsy nampoizina ny ekipa Dominikana tamin'ny nanintsanan'i Holandy azy tamin'ny fifaninanana, ary avy eo nifandrina tamin'i Kiobà indray. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
ondea (nitranga in-1) : Tao amin'ny Twitter, hoy ny tao amin'ny fiadidian'ny filoha:
hisioka (nitranga in-1) : Mbola ala mangitsokitsoka anefa no hodiavina ka asakasak'izay hisioka sahady. (Dingana voalohany)
nosokirina (nitranga in-1) : Olona telo no nosokirina tao anatin'ilay fiara ary soa ihany fa tany anaty rano no lasa ilay fiara. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
Cedeño (nitranga in-1) : #ManguPower
notarihy (nitranga in-1) : nANARARAOTRA > Omaly hariva no nidina an- dalambe nirohotra nana-titra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjan' Ambohijatovo ho fanamarihana ny andron'ny 29 marsa ireo mpikambana eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana izay notarihin'ny Filohan'ny kaongresin'ny tetezamita, Mamy Rakotoarivelo. (Sombiny)
nilaza (nitranga in-6) : Manoloana izany fahabangana teo amin'ny asan'ny mpitatitra izay dia maro tamin'izy ireo no nilaza fa hanonitra ny ora fiasana ka hiantoka ny fitaterana hatramin' ny alina aza, amin'ity faran' ny herinandron'ny Paska ity. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
ekipa (nitranga in-9) : Hialoha io lalao sangany io dia hifanehatra eo amin'io dingana ampahavalon-dalana io ny Cosfa sy ny Ravinala, izay ekipa avy any Ankadikely mifaninana eo amin'ny diviziona faharoa. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
boahary (nitranga in-1) : Isan' izany ny fitsidihana ny valan-java- boaharin'i Tsimbazaza. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
Maurille (nitranga in-1) : “Hitohy amin'ny faritra maro izany ary hahazo ny anjarany avokoa ny fari-piadidiam-pampianarana rehetra”, araka ny nambaran'i Tsilanizara Maurille, talen'ny ofisy nasionaly momba ny fampianarana tsy miankina (Onep). (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
nanamarihan' (nitranga in-1) : niavaka ny nanamarihan'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) sy ny mpiara-miombon'antoka aminy ny fanomanana ny fetin' ny Paska, tamina lalan-kely mirefy 70 metatra sy lakandrano mirefy 200 metatra. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
nifanatrehan' (nitranga in-1) : lasa izay, ny enina amby enimpolo taona nitolomana
Báez (nitranga in-1) : Tania Báez, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra nilaza tamin'ireo mpanaraka azy hoe:
mariky (nitranga in-1) : Na mbola ho dinika savaranonando ihany aza no hotanterahina amin'io fotoana io, dia mba efa mariky ny fivoarana aloha izay. (Dingana voalohany)
hampifaliana (nitranga in-1) : rahetivololona sy Ralivao Sitraka Hanitrinialasamy milaza ny heviny amin'ny fanamarihana ny Paska
Anamy (nitranga in-1) : B A
voatanan' (nitranga in-1) : voatanan'ny Tana handball Club (Thbc), izay nisolo tena antsika tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Rano- masimbe Indianina, tamin'ny isa 22 no ho 22 ny ekipam-pirenena malagasy, izay hiatrika ny IHF Trophy hatao any Djibouti. (Handball – Notsapain’ny Tana Handball Club ny ekipam-pirenena)
MVola (nitranga in-1) : Manome tolotra hafa koa ny mpikarakara amin'ny alalan'ny MVola ho an'ireo mbola te hiantsena kanefa tsy ampy na lany ny hoenti-manana am-pelantanana. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
hijinja (nitranga in-1) : Milaza ity zava-bita ity fa afaka manatratra tsara ny tanjona fototra tamin'ny taom-pijinjana 2012 ireo tantsaha, izany hoe, hijinja vokatra tsy misy fatiantoka ary ho afaka hanolotra masomboly 1. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hijerena (nitranga in-1) : Tsy hijerena olona na antoko politika ny asa fa izay rehetra vonona hanome tanana entina hanatsarana sy hampandroso ny tanàna dia raisina avokoa”, hoy ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, avy amin'ny Cua izay nitarika ity hetsika ity. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Lebap (nitranga in-1) : Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Batou (nitranga in-2) : Ao anatin'ilay Hetsika “D Full party” izay hatao eny amin'ny Batou Beach eny Ambohimanambola, dia karazan-dalao 30 no hatolotry ny Canal 7 Events, mpikarakara ho an'ny mpanotrona. (Tsipy kanetibe – Mpilalao fito lahy no hifan- tenana efatra ho any Frantsa)
muerte (nitranga in-1) : Hoy llego el día de la verdad para nuestra selección Dominicana, hoy vida o muerte con Netherlands. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
тысяч (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
nanamontsanan' (nitranga in-1) : Tamin'ny isa 80 no ho 31 no nanamontsanan'ny ekipan'i Matsiatra ambony ny avy any Sofia, omaly. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
Edgard (nitranga in-1) : Iarahana mikarakara amin'ny PDS Razafindravahy Edgard sy ireo Boriborintany eto an- drenivohitra ity fifaninanana baolina kitra ho an'ireo taninketsakan'Iarivo ity, izay nanome azy ny kianjan'Alarobia hanaovana izany. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
hifarana (nitranga in-1) : Nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo io tsena io ary tsy hifarana raha tsy anio sabotsy. (Varotra fitafiana tonta – “Tsenaben’ny friperie” hatramin’ny anio)
fanehoankevitr (nitranga in-1) : Nanao fanehoankevitr mahatsikaiky [ru] i Toyli, amin'ny maha mpampiasa azy:
Ну и что. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
kajikajy (nitranga in-1) : Tsy misy kajikajy fa dia fitsatotsatohana laharana ihany koa no nahazoany io loka io. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
días (nitranga in-1) : Na ny Ligin'ny Baseball Dominikana aza namoaka izao tamin'ny kaonty Twitter-ny:
hotanterahina (nitranga in-2) : «Mbola miankina amin'ny dinika sy adihevitra hotanterahina amin'ireo andro roa ireo ny fanoloranay kandidà na tsia. (Dingana voalohany)
Andriamiarinosy (nitranga in-2) : Midina ifotony, mikaroka ny katitakely manan-talenta amin'ny baolina kitra Andriamiarinosy Augustin, ilay mpilalao iraisam-pirenena, reha- rehan'ny kitra malagasy fantatra amin'ny fiantsoana hoe Augustin Baovola. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
заготовительные (nitranga in-1) : ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
navoitra (nitranga in-1) : “Ny fampihavanam-pirenena tsy idiran'ny resaka politika no tena tiana navoitra nan- dritra io hetsika io, satria maro ireo ratsy manimba ny firenentsika, toy ny fisotroan-toaka, ny kolikoly, ny fitiavan-tena ary ny hafetsena”, hoy Raharison Tsilavo, filohan'ny sampana izay ivondronan'ny Laika ary miasa ivelan'ny fiangonana nikarakara ity fotoam-pivavahana ity. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
isana (nitranga in-1) : MIARA-TAPITRA > Raha ny nambaran'ny minisitra misahana ny Fampifandra- isana ireo andrim-panja-kana, Victor Manantsoa dia tokony hovitaina miaraka amin'ny fikatonan'ny lisi-pifidianana ofisialy ny fampihavanam- pirenena izay tanterahan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy. (Sombiny)
naniriako (nitranga in-1) : « Ela no naniriako hahazo solosaina hanatontosako ny fianarako. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
nosafidian' (nitranga in-1) : Iny faritra iny no nosafidian' ny mpiara-miombon'antoka noho izy iakaran'ny rano rehefa fahavaratra tahaka izao. (Andavamamba – Nodiovina sy namboarina ny lalan-kely sy ny lakandrano)
Andriampamaky (nitranga in-1) : fiara iray marika »Mercedes Sprinter » nitondra olona avy any Ambatolampy hihazo an'Anjozorobe no tra-doza teo Andriampamaky, ny alarobia hariva teo tokony ho tamin'ny 4ora sy sasany. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
Tatery (nitranga in-1) : Taterin'[ru] ny tranonkala tantànan'ny fanjakàna, Turkmenistan. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
Nanisana (nitranga in-1) : B A
Sprinter (nitranga in-1) : fiara iray marika »Mercedes Sprinter » nitondra olona avy any Ambatolampy hihazo an'Anjozorobe no tra-doza teo Andriampamaky, ny alarobia hariva teo tokony ho tamin'ny 4ora sy sasany. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
nikarakara (nitranga in-1) : “Ny fampihavanam-pirenena tsy idiran'ny resaka politika no tena tiana navoitra nan- dritra io hetsika io, satria maro ireo ratsy manimba ny firenentsika, toy ny fisotroan-toaka, ny kolikoly, ny fitiavan-tena ary ny hafetsena”, hoy Raharison Tsilavo, filohan'ny sampana izay ivondronan'ny Laika ary miasa ivelan'ny fiangonana nikarakara ity fotoam-pivavahana ity. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
доставить (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
hanatontosako (nitranga in-1) : « Ela no naniriako hahazo solosaina hanatontosako ny fianarako. (Lalao vintana – Mpianatra avy any Ambohimahasoa no nahazo Ar 10 tapitrisa)
Ratsimandrava (nitranga in-1) : ny 2 avrily 1969 no nandraisan'ny lietnà- kolonely Ratsimandrava Richard ny fibaikoana voalohany ny zandarimariam-pirenena malagasy. (Andron’ny zandary – Hisokatra amin’ny fanontanian’ny rehetra ny zandarimaria)
Monica (nitranga in-2) : Monica Rasoloharison. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
Sopharmad (nitranga in-1) : B A
taninketsakan' (nitranga in-1) : Iarahana mikarakara amin'ny PDS Razafindravahy Edgard sy ireo Boriborintany eto an- drenivohitra ity fifaninanana baolina kitra ho an'ireo taninketsakan'Iarivo ity, izay nanome azy ny kianjan'Alarobia hanaovana izany. (Kitra « Tournoi de l’espoir » – Boriborintany iray eto an-drenivohitra ihany no tsy ho etsy Alarobia)
Samaritana (nitranga in-2) : Vavaka lehibe ho an'ny tanindrazana no nasandratry ny antoko mpihira maro sy ireo mpitarika ao amin'ny Sampana Samaritana Tsara Fanahy, omaly, teny amin' ny fokontany Ambohipo. (Asa fitoriana – Nampiantrano vavaka ho an’ ny firenena Ambohipo)
fitahirizana (nitranga in-1) : Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
voninahitr' (nitranga in-1) : mbola hihatery ny masontsivana hifantenana ireo mpilalao hiatrika ny fampivondronana faharoa hatao eto Antananarivo
diviziona (nitranga in-2) : Hialoha io lalao sangany io dia hifanehatra eo amin'io dingana ampahavalon-dalana io ny Cosfa sy ny Ravinala, izay ekipa avy any Ankadikely mifaninana eo amin'ny diviziona faharoa. (Baolina kitra Analamanga – Hifandona matetika ny Iarivo FC sy ny Tana Formation)
собрать (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
tsoahinaNa (nitranga in-1) : Misy lesona tsoahinaNa misy na tsy misy ny vola, ho an-dRahetivololona Lalaina indray dia tsy maintsy misy lesona tsoahina amin'ny fialamboly atao rehefa fialan-tsasatra. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
Noferana (nitranga in-1) : Noferana ho Ar 5 000 eo ny fandraisana anjaran' ny tsirairay », hoy Ralivao Sitraka Hanitriniala. (Fetin’ny Paska – Samy manana ny tetibola hampifaliana ireo ankizy ny isan-tokantrano)
nampoizina (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2009, niaina faharesena tsy nampoizina ny ekipa Dominikana tamin'ny nanintsanan'i Holandy azy tamin'ny fifaninanana, ary avy eo nifandrina tamin'i Kiobà indray. (Nandresy Tamin'ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana)
Nandika (nitranga in-2) : Mpanoratra Pamela Martínez Achecar · Nandika Mamisoa
Duchesne (nitranga in-1) : nisokatra omaly zoma teny amin'ny Kianjam-pasika, Fort Duchesne ny fifanintsanana amin'ny Tournoi Mafibe, ho an'ny sokajy senior, kitra lalaovin'olona fito, hiadiana ondry ao anatin'ny telo andro. (Kitra « Tournoi Mafibe » – Hilalao inenina avy ny ekipa 16)
Tiorkmena (nitranga in-5) : rehefa antontan'isa no resaka, dia mijanona manaraka am-bokony fotsiny ny foto-kevitra fony faha-Sovietika ny governemanta Tiorkmena, toy ny amin'ny boky fandrahoan-tsakafo, fanodinkodinana angon-tahiry sy fanalàna an'izay marina rehetra mety manelingelina. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
Ambohijatovo (nitranga in-3) : somary nanahirana ireo mpitatitra mpampiasa ny lalana mandalo etsy Ambohijatovo ny fanapahan-dalana noho ny fisian'ny lanonana fankalazana ny fetin'ny 29 marsa. (Sombiny)
Nentina (nitranga in-1) : Nentina notsaboina avy hatrany tetsy amn'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria-navaloana avokoa ireo olona naratra. (Fetin’ny Paska – Olona saika handeha hanao fety tany Anjozorobe tra-doza teo Andriampaky)
Достижение (nitranga in-1) : Достижение этого результата говорит о том, что земледельцы смогут справиться с главной задачей страды-2012 – без потерь собрать богатый урожай хлеба и доставить в закрома Родины 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
navoakan' (nitranga in-2) : Raha ny tarehimarika navoakan' ny sehatra mpanara-maso ny vary dia Ar 720 eo ny kilaon' ny akotry, Ar 1 270 ny vary gasy, Ar 1 370 ny makaolika, Ar 1 290 ny tsipala, Ar 1 270 ny vary “stock”. (Sombiny)
zakay (nitranga in-1) : Entina hanampiana sy hanamaivanana ny vesatra zakain'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny ankizy no voalaza fa anton'izao fanampiana izao. (Fanabeazana – Nahazo fanampiana Ar 1450 tapitrisa ireo sekoly tsy miankina)
ahiana (nitranga in-1) : Tsy fantatra izay tena antony nahatonga ny loza, saingy ahiana ho vokatry ny fandehanana mafy izany. (Ampitatafika Ambohimandroso – Kamiao iray latsaka tany anaty rano)
teto (nitranga in-1) : ny alakamisy nanom- boka tamin'ny 9 ora alina dia efa nakatona avokoa ireo trano fivarotana alikaola rehetra teto an-drenivohitra sy ny manodidina. (Fanjifana toaka – Ny alin’ny alakamisy no efa tsy nahazo nivarotra intsony)
nihaona (nitranga in-1) : Efa tany amin'ny fiafaran'ny lalao kosa vao tafita ny ekipan'Amoron'i Mania, raha nihaona tamin'ny avy any Atsimo Atsinanana, ka nandresy 63 no ho 62. (Telma challenge national U22 – Nahatafita ekipam-paritra roa i Fianarantsoa)
2008 (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny Index Mundi azy, izay manambatra ireo endrika mampiavaka ny firenena, amin'ny fampiantranoana ireo olana miainga avy aminà loharano maro (amin'ity tranga ity aloha, toa iray ihany), dia tapitra tsy nisy intsony tamin'ny 2008 ny olona mitondra ny otrikaretina VIH tany Tiorkmenistana – raha ny antontan'isa no vakiana. (Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka)
nahalalana (nitranga in-1) : fampitam-baovao avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny seraseran'ny Zanda-rimariam-pirenena no nahalalana fa tsy manka- sitraka ilay didim-pitsa-rana nivoaka namotsorana ireo Srilankey vitsivitsy voarohirohy tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harena an-kibon'ny tany any Didy ireo vato nasondrotry ny tany avy any an-toerana. (Raharaha didy – Tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ireo vato nasondrotry ny tany)
irony (nitranga in-1) : ndao
Hanavotra an'i Madagasikara, izay atao kilalao Fa isika efa zatra mitantana fa tsy irony mpanavao Ry vehivavy. (Daty manan-danja)
Toyly (nitranga in-1) : Nanao fanehoankevitr mahatsikaiky [ru] i Toyli, amin'ny maha mpampiasa azy:
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/30_Martsa_2013&oldid=10375451"
Voaova farany tamin'ny 30 Martsa 2013 amin'ny 22:10 ity pejy ity.